Ogaden News Agency (ONA) – Ergayga QM ee Soomaaliya oo Sheegay In Cunaqabataynta Hubka Lagu Siihayn Doono Dalka Soomaaliya.
Ergayga QM ee Soomaaliya oo Sheegay In Cunaqabataynta Hubka Lagu Siihayn Doono Dalka Soomaaliya.
Danjiraha Qaramada Midoobay (QM) u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo wareysi gaar ah siiyey Telefishinka dowlada Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay kamid yihiin amniga & la dagaalanka Al Shabaab iyo Arrimaha Siyaasada & Doorashooyinka.
Ambassador Keating ayaa ka hadlay ahmiyada ay leedahay la dagaalanka Al Shabaab iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa guud ahaan dalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay inay lama huraan ay tahay in wadanka Soomaaliya uu dhisto ciidamo Qaran oo tayo leh oo sugi kara amniga wadanka.
Danjiraha oo ka hadlay ciidamada AMISOM ayaa sheegay inay ciidamada Midowga Afrika ku sugan yihiin guud ahaan koonfurta Soomaaliya marka laga reebo deegaanada Puntland, wuxuuna sheegay in hada la wado qorshe ah in maamulada kale ee dalka u yeelan lahaayeen ciidamo amniga sugi kara.
Soomaalidu waa inay iyagu ciidankooda dhistaan oo ay La baxaan lacagta ciidankooda ku shaqeeyo, ayuu yiri Michael Keating. Walow uu sheegay inay og yihiin in arrintaasi wakhti qaadan karto caqabadaha jira awgood.
Mar la weydiiyey Safiirka Qaramada Midoobay sababta loo qaadi waayey cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya, maadaama ay muhiim u tahay sida uu yiri Wariyaha u shaqeeya Warbaahinta dowlada.
Keating oo arrintaasi ka jawaabayey ayaa sheegay in Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ay qabaan fikir kaasi ka duwan isla markaana aan xiligan wax kalsooni ah lagu qabin in hubka la keeno dalka aysan gacanta u geli doonin kooxaha argagaxisada iyo kuwa kale ee amniga khal khalka ku keenaya.
Wuxuu sidoo kale ka hadlay dagaalada ka dhacay Gaalkacyo isagoo sheegay in ay muhiim tahay in la ixtiraamo heshiisyadii horey loo garay isla markaana dib loo soo cesho kalsoonidii ka dhaxeysay shacabka, taasina ay furo u tahay in marka hore xabada la joojiyo.
Michael Keating oo ka hadlay hawlaha doorashooyinka socda, ayaa sheegay inay jiraan dib u dhacyo balse ay si dar darleh ay ku socdaan soo xulida Xildhibaanada, wuxuuna sheegay in dhawaan ay imaan doonaan Muqdisho Xubnaha labada Aqal ee Golayaaha Federaalka ee soo dooran doona Madaxweynaha.
Waxaa rajeenayaa in Kooramka Baarlamaanka Aqalka Hoose lasoo doorta maalmaha soo socda, isla markaana horey loo galo Doorashada Golaha Baarlamaanka, inta ka hartay Xildhibaanada gadaal laga soo buuxin doono intaan la gaarin doorashada Madaxweynaha, ayuu yiri Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Keating ayaa yiri: “…Wax walba oo aan sameeno waa nala cambaareeyaa hadaanahay Beesha Caalamka, hadii aan talo soo jeedino waxaa la yiraahaa faraha kala baxa arrimaha Soomaaliya, hadii aan ka aamusno waxaa la dhahaa maxaad uga aamusan tihiin, qaabka ay doorashadan u dhaceyso maaha mid aan anagu keenay balse waa mid ay Soomaalidu iyadu la timid….”